Igama le-ESPOSITO Igama kunye Nemvelaphi
Igama le-ESPOSITO Igama kunye neNtsapho yeMbali
Liyini igama eligqityiweyo elithi Esposito?
Igama eliqhelekileyo lesiTaliyane u-Esposito laliyigama lokugqibela elinikezelwa abantwana base-Italy (ngaphambi kokuhlanganiswa kwayo ngo-1861) abaye bashiywa okanye banikezelwa ukuba bamkelwe ngabazali babo. Igama livela kwi-Latin expositus , iqela elidlulileyo legama lesiLatini elithi exponere , elithetha "ukubeka ngaphandle." Isiteti se-Esposito ixhaphake kakhulu kwindawo yaseNaples yaseItali.
Igama elithile Igama lokuphala : ESPOSTI, ESPOSTO, ESPOSTI, DEGLI ESPOSTI, SPOSITO
Igama lomthombo: isiTaliyane
Abantu abaPhezulu abanegama le-ESPOSITO
URaffaele Esposito - umpheki wenyama wabhalwa ngokuqala kokudala i-pizza yamanje
Izibonelelo zoGenesalogy for the Name ESPOSITO
I-Esposito Crest Family - Akusikho Oko Ucingayo
Ngokuchasene noko ungayiva, akukho nto into enjenge-Esposito intsapho okanye isambatho seengalo kwiSenposito. Iingubo zeengalo zinikwe abantu ngabanye, kungekhona iintsapho, kwaye zingasetyenziselwa ukusetyenziswa kuphela ngabantu abangenakuphazanyiswa inzala yomntu oye wanikwa ingubo yeengalo.
I-ESPOSITO Iforum yoLuntu lweGenaalog
Ibhodi yemilayezo yamahhala igxile kwinzala ka-Esposito okhokho emhlabeni jikelele.
I-FamilySearch - I-ESPOSITO Imbali yoBantu kunye neNtsapho
Phonononga ngaphezu kwama-350,000 amarekhodi eembaliweyo kunye neengxelo ezibhaliweyo, kunye nemithi yentsapho edibeneyo yomgca ngegama le-Esposito.
Igama le-ESPOSITO Igama lokuthumela
Uluhlu lokuposa lwangaphandle lwabaphandi begama le-Esposito kunye nokuhluka kwalo kubandakanya iinkcukacha zokubhaliselwa kunye neengxelo ezigcinwe ngophawu lwemiyalezo edlulileyo.
Igama lokufumana igama - I-EPSOSITO Genealogy & Resources Family
Fumana izixhumanisi kwiindawo zamahhala kunye nezorhwebo kwifayile ye-Esposito.
I-GeneaNet - IiRekodi ze-Esposito
I-GeneaNet ibandakanya iirekhodi zokugcinwa kweenkcukacha, imithi yentsapho kunye nezinye izibonelelo kubantu ngabanye abanegama le-Esposito, kunye neengcamango kunye neentsapho ezivela eFransi nakwamanye amazwe aseYurophu.
DistantCousin.com - I-ESPOSITO Ulwalamano kunye neNtsapho yeMbali
Hlola ii-database zolwazi zamahhala kunye neefayili zodidi lwegama lokugqibela igama elithi Esposito.
I-Esposito Genealogy and Family Tree Page
Dlulisa amehlo kwimithi yentsapho kunye neengqungquthela kwiirekhodi zomthonyama kunye neembali zabantu ngabanye abanegama lokugqibela elithi Esposito kwi-website yeGenesalogy Today.
Iingcebiso eziphezulu zokufumana igama elinguNye igama elithi Spellings & Variation
Iipikes Peak: I-31 ephezulu kwiNtaba yaseColorado
I-Classic Monologue evela "kwi-Oedipus yoKumkani"
Iintlobo ze-3 zeDwala lokunyuka: iGranite, iSandstone & Limestone
Inkcazo kunye nemizekelo yokuBhala
Iimvumi ezili-10 ze-Krismesi ze-Kids
Umbutho wo qoqosho
Indlela yokusebenzisa i-Rock Tumbler kwiigrafu zasePoland
I-American Revolution: I-Battle of Hobkirk Hill
Admissions yaseYunivesithi yaseTampa
Yonke iSixeko saseYuba sonyaka we-Sikh Parade
Umpostile uPawulos - umKristu umthunywa
Imfazwe Yehlabathi I: UMarshal Philippe Petain